नेकपाको अन्तरकलह : ओलीसँग प्रचण्ड–नेपाल फुट्लान वा बिवाद मिलाएर जुट्छन ? – Mission Khabar
नेकपाको अन्तरकलह : ओलीसँग प्रचण्ड–नेपाल फुट्लान वा बिवाद मिलाएर जुट्छन ?
मिसन खबर ४ पुष २०७७, शनिबार १९:०४
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक किचले थप बढ्दैगर्दा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफै विवाद समाधानको दौडधुपमा देखिएका छन् । बिहान पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेका ओली त्यसपछि नेकपासचिवालय सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सरकारी निवास पुल्चोक पुगे । पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वाटरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङ र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसँग समेत छलफल गरे । सबै छलफल पार्टीको आन्तरिक गतिविधिकै विषयमा केन्द्रित भएको बताइएको छ ।